शुक्रबार, ८ पुष, २०७३ मा प्रकाशित,
अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद कुमार खड्काले हिमाल , पहाड र तराईलाई सम्बोधन गरिरहेको पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउनु पर्ने विषयलाई संसदमा निकै उठाउँदै आएका छन् । उनले जातीय विभेद अन्त्यका नाममा ठूला दलहरुले जातीय विभेदलाई बढवा दिएको दावी गर्दै अहिलेको आबश्यकता वर्गीय विभेदको अन्त्य रहेको बताउँदै आएका छन् । खड्कासंग हामीले संविधान संशोधन र प्रदेश सीमांकन कलहमाथि केन्द्रीत रहेर छोटो कुराकानी गरेका थियौँ । प्रस्तुत छ - उक्त कुरा कानीको छोटो अंश :
प्रदेशको सीमांकनको विवाद पेचिलो बनिरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेशमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ , यसको अर्थ के हुनसक्छ ?
यो अत्यन्त सही प्रस्ताव हो । जसलाई अखण्ड नेपालले संविधानसभा , सडक र संसदमा उठाउँदै आइरहेको हो । संविधान संशोधनका क्रममा संविधानसभामा पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँचवटा प्रदेश बनाउनु पर्ने मेरो संशोधन प्रस्तावमा मेरो मात्र एक मत परेको थियो । त्यसबेला ओलीजी लगायत ठूला दलका नेताहरु यसप्रस्तावमा सकरात्मक भइदिएको भए , अहिले उठेको प्रदेश किचलोको अवश्था नै आउने थिएन ।
सात प्रदेशबाट पछाडि हटेर पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेशमान्न सकिने अवश्था रहन्छ त ?
यदि राजनीतिक नेतृत्वहरुले आग्रह र पूर्वाग्रह , राजनीतिक लाभ र हानीको साटो नेपाल र नेपालीको हितलाई केन्द्रमा राखेर यस्तो निर्णय गर्ने हो, भने संसदबाट यसलाई पास गराउन अफ्ठायारो छैन ।
जहाँसम्म जनताको प्रतिकृयाको कुरा छ , संविधानको मस्यौदा माथि जनताको राय लिने क्रममा देशका सम्पूण भूगोलबाट जनताले दिएको सुझाव यही नै थियो ।
तर , मधेसवादी दलहरुले त पहाडसंग मधेसको भूभाग जोडिदा मधेसी जनताको अधिकार गुम्ने बतइरहेका छन् । यही कुरालाई सम्बोधन गर्न कांग्रेस , माओवादी केन्द्रले संशोधन प्रस्ताव पनि अगाडि बढाएका छन नि त ?
मधेसका जनताहरु पनि राट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध छन् । केही मधेस केन्दीत राजनीतिक दलका नेताहरुले मधेस र देशको हितभन्दा आफ्नो हितलाई केन्द्रमा राखेर हिमाल , पहाड र मधेस जोड्ने प्रस्तावको विरोध गरेता पनि बहुसंख्यक मधेसी जनताहरु तराई , पहाड र हिमाललाई छुट्याउने पक्षमा छैनन् ।
यहाँ नागरिकको भावनाभन्दा पनि दलहरुको सनकले बढी काम गर्छ नि होइन ?
अहिले सम्म त्यही देखिएको छ । जसका कारण देशको संक्रमणकाल लम्बिदै गइरहेको छ । दुर्भाग्यपूर्ण सत्यका कारण राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुन सकिरहेको छैन ।
पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुलाई मधेसबाट अलग्याउने कुरा आइरहेका बेला पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश मान्ने वहस चल्दै छ , यो कति सार्थक होला
पाँच नम्बर प्रदेशमा भएको आन्दोलनको कारण के हो तराईलाई पहाडसंग अलग्याइयो भन्ने जनआक्रोश होइन र यो । जनता हिमाल , पहाड तराईसंगै भएको , संगै रहेको देख्न चाहन्छन् । यो जनभावना सम्बोधनको सर्वोत्तम विकल्प हिमाल , पहाड र तराई भएको चीन र भारत तर्फ पहुँच भएको प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको समुचित व्यवस्थापन र उपलब्धता भएको विकास क्षेत्र बाहेक अरु के हुन सक्छ ।
पाँच विकास क्षेत्रमा तपाईले भनेजस्तो छ ?
छ नि ।
संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण के होला ?
संविधान दलहरुका अबधारणाको सम्झौताको दस्तावेज मात्र बनेको छ । संविधानमा जनभावनालाई लिपिबद्ध गर्न तर्फ केन्द्रीत गरेको भए जनताले नै यसको रक्षा गर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने थिएन ।
अहिले मुलुकको राजनीति पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाह र निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमासिंह कार्कीमाथि केन्द्रीत छ । यी दुई व्यक्तिबाट उपलब्ध राजनीति माथि खतरा छ भनिदै छ । एक दुई व्यक्तिले नै गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न सक्ने स्थिति रहन्छ हो ?